मेकअप mods: आफ्नै हात, विकल्प कसरी बनाउने
यो लामो OBLIVION मा पारित गरेको छ पछिल्लो शताब्दीको उज्ज्वल र लापरवाह sixties छन्। तर आधुनिक महिलाहरु सधैं यो अचम्मको समय सम्झना हुनेछ "पश्चिमी फैशन बन्ने।"
आखिर, कि अमेरिकी महिलाहरु एक चिटिक्क केश लगाउने र कारण बनाउन-अप गर्न सिकेका छन् जब हो। चाँडै बालिका कुनै कम सुरुचिपूर्ण जवान मानिसहरूले सामेल थिए। र यी mods "दोस्तों" को उच्चतम दर्जा प्राप्त गरेका छौं।
आज, यो शैली "पुनर्जन्म" छ। त्यसैले, हरेक Fashionista आफ्नो उपस्थिति र रंगीन विशेष बनाउन सक्नुहुन्छ, मा-अप बनाउन mods शैली।
यो चुनौतीपूर्ण वा, conversely शालीन, चिटिक्क वा अलिकति लापरवाहीसंग हुन सक्छ। तर, जे भए पनि, mods मेकअप सधैं बोल्ड र स्त्री देखिन्छ।
को छवि "पश्चिमी Fashionista।" कसरी सिर्जना गर्न? के हेर्न?
सबै को पहिलो, हामी कुनै कुरा के बनाउन-अप, तर यो उज्ज्वल हुनुपर्छ कि सम्झना हुनुपर्छ! छवि प्रमुख तत्व - लामो तीर, अलिकति पनि शताब्दीको कुनामा उठाएको र रातो उज्ज्वल लिपस्टिक छ। र को पाठ्यक्रम, मसी को एक मोटी पत्र। को स्पष्ट चमक भए तापनि यसलाई मेकअप लागू गर्दा ठिक्क पालन गर्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा यहाँ - पनि छाला रंग। प्राप्त गर्न "सिद्ध" व्यक्ति आधुनिक बनौटको मद्दत संग हुन सक्छ।
यो गर्न, यो एक कंसीलर र हाइलाइटर चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। आफ्नो मद्दत संग छाला को सबै अनियमितताहरु र कमजोरीहरू मास्क, र त तपाईं टोन अनुहार टोन align गर्न सक्नुहुन्छ। को सञ्चय पाउडर माथि। यो छाला मैट बनाउन मद्दत गर्नेछ। रहनसहन प्राकृतिक hipsters हेर्न गर्नुपर्छ देखि, एक छाडा पाउडर र पारदर्शी चयन गर्न राम्रो। गत शताब्दीको बीचमा यो वोग मा तन थियो!
मेकअप लागू गर्न: छाला टोन सिद्ध हुनेछ गर्दा, तपाईंले अर्को चरणमा अगाडि बढ्न सक्छ। स्टार्टर्स लागि, तपाईं एक क्लासिक अमेरिकी बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो संस्करण - ध्यान आँखा छ।
पछिल्लो एक अद्भुत छवि बनाउन चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
त्यसैले, कसरी चरण mods द्वारा एक स्वादिष्ट बनाउन-अप चरण बनाउने?
तीर हो - सबै को पहिलो, यो embodiment मा आँखा मेकअप मा मुख्य कुरा बुझे गर्नुपर्छ। तपाईं समकालीन शैली, र हाम्रो हजुरआमा को उदाहरण तिनीहरूलाई आवश्यक छैन:
यस शताब्दीमा बाक्लो कालो eyeliner को बीचबाट आवश्यक तीर लागू हुन्छ। पहिलो यो शताब्दीको बाहिरी कुना परे यसलाई ल्याउन र तिखार्ने र आँखा को भित्री कुनामा गर्न थप विस्तार आवश्यक छ।
तल्लो पटल को एक सानो कुनामा पातलो लाइन आकर्षित गर्नुपर्छ। यसलाई बनाउन-अप गर्न mods मात्र peculiar छ जो तीर, जडान हुनेछ।
सुकाएपछि, तपाईं छाया लागू गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बनाउन-अप शैली mods मा चमक "त्यत्तिकै छोड्न सक्दैनौं।" तसर्थ, छाया मात्र प्रयोग मैट हुन सक्छ। तिनीहरूले माथिल्लो र तल्लो पटल मा लागू छन्।
अर्को चरण - काजल लागू। यसलाई सरल छ: मोटा गरिनेछ अप, अधिक मेकअप रेट्रो शैली फिट हुनेछ।
लिपस्टिक हरेक केटी आफ्नो स्वाद अनुसार चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी रंग यो रातो सबैभन्दा नजिक हुनुपर्छ भन्ने सम्झनुपर्छ। यो कोरल हुन सक्छ, चेरी, बुरगुण्डी, रक्सी, दारिम, गाढा गुलाबी, रगत-रातो र लाल रंग को अन्य रंग। पातलो ओठ भने - तपाईं तिनीहरूलाई pearlescent प्रभाव प्रयोग गरेर मोहक मात्रा दिन सक्छन्।
मेकअप eyebrows - छवि को अन्तिम चरण। आधा शताब्दी पहिले, महिलाहरु उनको ओठ, खैरो वा रातो मेल उनको eyebrows रंग गर्न प्रेम गर्नुभयो। त्यसैले आज, रहनसहन mods पुन: सिर्जना गर्न, तपाईं खैरो लिप लाइनर वा आँखा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
वसन्त संस्करण: धनी, संतृप्त रंग प्रयोग सुन्दर मेकअप सिर्जना गर्न
वसन्त सबै बालिका को आगमन (विशेष गरी युवा) विपरीत सेक्स को ध्यान आकर्षित गर्न उज्ज्वल कुराहरू मा पोशाक गर्न खोज्नुभएको छ। यस्तै catchy रंग बनाउन-आपा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
को के हो वसन्त बनाउन-अप दोस्तों? कसरी यो राम्रो र "बुद्धिमान" बनाउने?
पहेंलो, हल्का खैरो, सुन्तला, कोरल: सबै को पहिलो, आफ्नो छवि लागि, तपाईं रंग को न्यानो रंग चयन गर्नुहोस्। यसलाई राम्ररी प्रत्येक अन्य विभिन्न रङ संग संयोजन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। को कोरल माथि रंग को पहेलो छाया (तपाईं पनि एक pearlescent प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ) र बस पहेलो माथि मत्ती सेतो।
त्यसपछि व्यक्ति कस्मेटिक्स को लागि आवेदन तयार छ। tonal आधारभूत को लागि आवेदन नियम नै बाँकी छन्। त्यसपछि तपाईं माथिल्लो परेलिहरु रंग गर्न सक्नुहुन्छ - छाया र छाया औंलाहरु एक सानो को पातलो पत्र लागू, र पछि - कालो पेन्सिल तीर आकर्षित। तिनीहरूले आँखा को बाहिरी कुना एक सानो थप अन्त्य हुनुपर्छ, तर तिनीहरू बास गर्न आवश्यक छैन। को तीर को सुझाव स्पष्ट हुनैपर्छ।
कम से कम podkrashivayutsya भौं पेन्सिल खैरो वा हल्का मर मा।
मेकअप मा नोट
मेकअप mods को "न्यानो" संस्करण प्रयोग काजल "को निषेधित"। यो एक अर्थमा सिर्जना गर्नुपर्छ "मलिन नजर।" तर यो विकल्प सबै बालिका गर्न उपयुक्त छैन भनेर टिप्पण लायक छ। यसलाई छोडेर गर्नुपर्छ, आँखा प्रकृति सानो वा संकीर्ण छन् भने भट्ठा आँखा।
रोचक मेकअप विकल्प: उच्च तीर र हरियो छाया
यो मेकअप शैली mods रोमान्टिक साँझ एक पक्ष वा रेस्टुरा जाँदै लागि सिद्ध छ। यो विकल्प तीव्र Emerald हरियो छाया आवश्यक हुनेछ। को रङ्ग उज्ज्वल र शान्त टन दुवै हुन सक्छ हुनत। को छाया आफ्नो नजरमा हेर्न कसरी, निर्भर गर्दछ, को पाठ्यक्रम, रंग, साथै साँझ प्रकाश।
मेकअप आवेदन प्रविधी छैन, अघिल्लो संस्करण विशेष फरक छ केही nuances बाहेक:
, एउटै छाया को एक पत्र मात्र हल्का टोन - मुख्यतया चल्ने माथिल्लो ढक्कन र माथि सानो मा उज्ज्वल रंग को पर्याप्त बाक्लो तह superimposed।
अर्को चरण - एक निर्देशन तीर। Podtochennaya कालो पेन्सिल प्रत्येक आँखा मा तीर सीमाना ल्याउन। तिनीहरूले सामान्य भन्दा उच्च राखिएको हुनुपर्छ, तर छोटो रहनुहोस्। यो तीर इशारा यो संस्करण पुराना बनौटको यस प्रकारको एक "हाइलाइट" छ।
अर्को तपाईं इरादा पेन्सिल रेखाहरू बीच नै खाली स्केच गर्न आवश्यक छ। यी तीर एकदम expressive र धेरै बाक्लो छन्। तिनीहरूले नजर थप expressive बनाउन।
निस्सन्देह, हामी eyeliner eyebrows भूल हुँदैन। परंपरागत, यो Crayon लागि खैरो कुनै पनि छाया चयन गरियो। यो शैली mods मा कस्मेटिक्स को आवेदन को मुख्य विशेषता हो।
तपाईं बनाउन-अप हरिताश्म परेला पूरा गर्नु पर्छ। मसी असंभव छैन तह लागू गर्न सकिन्छ। expressive आँखा लागि पर्याप्त र बस बाक्लो तीर हुनेछ। यहाँ कसरी आफ्नो हातमा बनाउन-अप दोस्तों गर्न छ।
यो यस्तो रूपान्तरणहरू डराएका हुन आवश्यक छैन, संक्षेप गर्न। आखिर, समय समयमा हरेक केटी, असामान्य extravagant महसुस गर्न, प्रशंसा हालन फसाउन चाहन्छ। र यसो, यो, पाठ्यक्रम, दोस्तों को छवि बनाउन-अप र Hairstyles, र कम उज्ज्वल लुगा उन्नत पश्चिमी युवा मध्य-बीसौँ शताब्दीका नहुन सक्छ!
स्वाद, स्थान, समीक्षा, फोटो: "Chanel 19 №"
रहनसहन bulbous नाक कसरी समायोजन गर्ने?
आँखा रंग कसरी परिवर्तन गर्ने?
मसी-स्टाइलिस्ट "अविश्वसनीय राशि", "Oriflame": समीक्षा, फोटो
मेसो-मास्क "Filorga" - आफ्नो अनुहार को सौन्दर्य र youthfulness। Filorga देखि मेसो-मास्क: समीक्षा
प्रमुख Gavrilov: जीवनी र फोटो
Kristofer Goram: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
को यूएई मा पर्यटन - लगातार गुणवत्ता छुट्टी
जुनून जामुनका फाइदाहरू के हुन्? तिनीहरूको चमत्कार शक्तिको रहस्य के हो?
Khatyn: दुःखद घटना को बेलारूसी गाउँ को इतिहास
LLC "Dyatkovo क्रिस्टल कारखाना": इतिहास, उत्पादन, उत्पादन
Artemia - घर मा प्रजनन।
जनवरी मा बिदाहरू - विकल्पहरू को किसिम।
शरीर भर एक बच्चा मा दाना। के गर्ने?
वाशर बेको: समीक्षा, विनिर्देशों, मोडेल चयन, मर्मत
संडसी लहर बाल: समीक्षा